Ogaden News Agency (ONA) – Xiisadii Ku Saabsanayd Doorasha Kenya oo Meel Xun Maraysa.
Xiisadii Ku Saabsanayd Doorasha Kenya oo Meel Xun Maraysa.
Posted by ONA Admin	/ October 20, 2017
Madaxa Guddiga Doorashooyinka ee Kenya Wafula Chebukati ayaa ugu baaqay xisbiyada dalkaasi inay joojiyaan cadaadiska ay saarayaan guddiga doorashooyinka kadib markii ay todobaadkan is casishay haweenay xubin ka ahayd guddigaasi.
Roselyn Akombe oo kamid ahayd guddiga Doorashada ayaa xilkeeda iska casishay iyadoo sheegtay in cadaadis badan la saaray guddiga isla markaana ay nafteeda u baqday, waxay haweenaydaasi sheegtay inaysan dooneyn inay qeyb ka ahaato doorashada la qorsheeyey inay dhacdo 26ka bishan.
Warbaahinta Kenya ayaa sheegaya in Mrs. Roselyn Akombe ay u baxsatay magaalada New York ee dalka Maraykanka, iyadoo horey ugu soo shaqeyn jirtay Qaramada Midoobay. Talaadadii lasoo dhaafay ayey maxkamada sare ee dalkaasi laalshay amarkii Xukuumada ay ku mamnuucday in mucaaridka ay mudaharaadyo ka dhigi karaan sadexda magaalo ee ugu waaweyn, Nairobi, Mombasa iyo Kisumu.
Arbacadii ayey dib u bilowdeen banaanbaxyada, hogaamiyaha Mucaaridka Raila Odinga ayaa sheegay in maalinta la qorsheeyey codbixinta inay dhacdo ee 26ka Oktoober ay dhici doonaan banaanbaxyo iyo mudaharaadyo aan horey loogu arag dalkaasi Kenya. Isbaheysiga Mucaaridka ayaa doonaya in gebi ahaan dib loo dhigo doorashada, isla markaana la kala diro hogaanka guddiga doorashooyinka oo ay ku eedeenayaan inay u xaglinayaan xisbi xaakimka uu hogaamiyo Madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Madaxweyne Uhuru ayaa isagu dhankiisa ku adkeysanaya inaan dib loo dhigi doonin xiliga loo qabtay inay dhacdo codbixinta ee todobaadka soo socda, isagoo sheegay inuu aqbalay in Maxkamada Sare ay laalshay guushiisii uu gaaray 8dii Agoosto, lagana rabo mucaaridka inay aqbalaan inay ka qeyb galaan codbixinta lagu celinayo ee dhaceysa 26ka bishan.